Semalt: कसरी रेफरर स्पामले कार्य गर्दछ र यसलाई Google विश्लेषकमा कसरी लुकाउने?
माइकल ब्राउन, Semalt ग्राहक सफलता को प्रबन्धक, HTTP रेफरर हेडर क्षेत्र हो कि जब ब्राउजरहरू एक वेब पृष्ठ बाट अर्को वेब पृष्ठमा जानको लागि पठाइन्छ। जब तपाईं त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईंको ब्राउजरले सर्वरहरूमा अनुरोध पठाउनेछ जुन इच्छित वेब पृष्ठहरू होल्ड गर्दछ। यस अनुरोधमा एक HTTP रेफरकर्ता क्षेत्र सामेल छ, जसले तपाईं अन्तिम लिंकलाई पहिचान गर्दछ जब तपाईं लिंकमा क्लिक गर्नुभयो। जानकारी स्प्यामरलाई तपाईंको वेबसाइटमा रेफर स्प्याम उत्पत्ति गर्न अनुमति दिँदछ। HTTP रेफरकर्ता खाली छोड्नु पर्छ किनकी यो स्प्यामरहरू द्वारा दुर्व्यवहार गरिएको हो जसले प्राय: दैनिक संदर्भकर्ता यूआरएलहरू परिवर्तन गरिरहन्छ। तिनीहरूको लक्ष्य तपाईंको लिंक प्रयोग गरेर उनीहरूको आफ्नै सामग्री प्रमोट गर्ने र तपाईंको खोजी ईन्जिन रैंकिंगको फाइदा लिन।
सर्वप्रथम, स्प्यामरहरू इन्टरनेटमा सयौंबाट हजारौं साइटहरूमा भ्रमण गर्छन् र ठूलो संख्यामा नक्कली रेफरर URL हरू उत्पन्न गर्दछ। तिनीहरू सबै साइटहरूमा दोहोर्याइ अनुरोध गर्दछन्, र जब तपाईं ट्राफिकमा तपाईंको Google एनालिटिक्स खातामा गलत यूआरएलहरू बाट वृद्धि देख्नुहुन्छ, तपाईंलाई लाग्नेछ कि भ्रमणहरू वैध स्रोतहरूबाट आएको हो। दोस्रो, स्प्यामरहरू र ह्याकरहरूले यस बानीको फाइदा लिन्छन् जुन विभिन्न ब्लगर्सले शicious्कास्पद साइटहरू र उनीहरूका भर्खरका सन्दर्भकर्ताहरूको सूची प्रकाशित गर्दछ, मूल वेबसाइटहरूमा ब्याकलिks्कहरू प्रदान गर्दै। स्प्यामरहरूले यो जानकारी व्यक्तिगत वेबसाइटहरूको लागि प्रयोग गर्दछ र रेफरर स्पाम बढाउँदछ, तिनीहरूलाई तपाईंको वेबसाइटमा पठाउँदै र सजिलै लि of्कहरूको फाइदा लिई आफ्नै वेबसाइटहरूमा फर्काउँदछ।
तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा रेफरर स्पाम कसरी लुकाउने?
तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाता र तथ्या .्कलाई प्रभाव पार्नेबाट रेफर स्प्याम रोक्नको उत्तम र सजिलो तरिका मध्ये एक अपमानजनक रेफररलाई रेफरल बहिष्करण सूचीमा थप्नु हो। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको साइट darodar.com बाट ट्राफिक प्राप्त गर्दै छ, तपाइँ तपाइँको Google एनालिटिक्स खाता को प्रशासन भाग मा जानु पर्छ र रेफरल बहिष्करण सूची छान्नु पर्छ। अर्को चरण भनेको रेफरर थप्नुहोस् बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र डोमेन नाम प्रविष्टि गर्नुहोस् यसलाई हटाउनका लागि। अन्तिम चरण भनेको क्रमश: सिर्जना र बचत बटनमा क्लिक गर्नु हो। यस तरिकाले, तपाई सजिलैसँग तपाइँको तथ्या from्कहरूबाट भ्रमणहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ जुन darofar.com वा यसको कुनै पनि उप-डोमेनहरू, जस्तो कि somesubdomain.com मा सम्बन्धित छ। तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्दछ कि यस विधिले तपाईंलाई सबै बोटहरू र माकुरालाई तपाईंको वेबसाइटहरू समग्र भ्रमण गर्न रोक्न मद्दत गर्दैन। यसका लागि तपाईंले आफ्नो .htaccess फाईलको सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुपर्दछ।
के रेफरर स्पामले काम गर्दछ?
यो सत्य हो कि रेफरर स्पाममा धेरै ट्राफिक वा हिटहरू उत्पन्न गर्ने क्षमता र क्षमता छ। यो संदिग्ध वेबसाइटहरूबाट उत्पन्न हुन्छ जब तपाईं उनीहरूमा अचानक पुग्नुहुन्छ र उनीहरूको तथाकथित प्रामाणिक सेवाहरूमा चासो देखाउनुहुन्छ। जब तपाईं धेरै लिंकहरू बढाउनुहुन्छ र गुणस्तर ब्याकलिks्कहरू सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ, रेफरर स्प्यामको सम्भावना बढेको छ किनकि ह्याकरहरूले सजिलै तपाईंको वेबसाइट यूआरएल ट्र्याक गर्न सक्दछन् र आफ्नै वेब पृष्ठहरूको लिंकहरू निर्माण गर्न यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्। ती हजारौं स्पाइडर र स्प्यामबोटहरू पठाउँछन् तपाईंको साइटलाई खोज इन्जिन परिणामहरूमा अनुक्रमणिका गर्न। तिनीहरू असुरक्षित वेबसाईटहरू मार्फत इन्टरनेटमा ठूलो संख्यामा व्यापार वेबसाइटहरू र ब्रान्डहरूमा नक्कली अनुरोधहरू पनि पठाउँछन्।